Mayelana ne-Aasraw Biochemical Technology Co.,
I-Aasraw Biochemical Technology Co, ltd yasungulwa ngabafundi abaneziqu zePh.D zobunjiniyela bamakhemikhali abavela eYunivesithi yaseTulsa, e-Oklahoma, etholakala ezweni laseMelika.
I-AASraw esanda kusungulwa yazuza imali ebalulekile yokuqalisa, ngakho-ke yakhanga amakhemikhali amaningi aphezulu, ikakhulukazi ngokugcizelela kakhulu embonini yezinto eziphilayo. Ngomhlahlandlela ophumelelayo wezimali zokuqala, sitshale imali yokusebenza yekhwalithi ephezulu eyazinikezwa ekuqaleni, ukuhlanzwa nokuhlaziywa komugqa wethu womkhiqizo. Siyi-laboratory ephelele ye-laboratory, hhayi nje umdayisi wemikhiqizo yenkampani. Sine-suite ephelele yezinto zokusebenza, kufaka phakathi - i-calorimetry yokuskena ehlukile, ukusebenza kwe-chromatography yamanzi ephezulu, ukusebenza kwe-infrared-spectroscopy, i-spectroscopy ebonakalayo-njll njll. Njengamanje sisebenzisa abanikazi bezobuchwepheshe abangaphezu kwezingu-20. Izimpahla zethu ezihleliwe zingaphezu kwezigidi ezingama-30 zamaRandi (US).
Ngaphandle kwemiklamo yethu yokubambisana yesikhathi eside, sahlela amaphrojekthi amasha angama-8 ngonyaka. I-AASraw inamakhemikhali angaphezu kwekhulu ngokukhiqizwa okuningi. Cishe amashumi ayisishiyagalolunye kulezi zinhlanganisela zinikezwa ngqo kubathengi, kuyilapho cishe ezingamashumi amabili zikhiqizwa ngaphansi kwenkontileka ezinkampanini ezingaphezu kwezingamashumi amathathu zemithi emhlabeni jikelele.
Ukulandela isiqubulo esithi "Ukuhlakanipha, Ukholo, Isevisi," I-AASraw inikeza izimpahla ngekhwalithi ehlukile, izindleko eziphansi, nokusebenza okugcwele ukuze uthole usizo olungcono emhlabeni wonke. Yonke imikhiqizo evela ku-AASraw inikezwa ngobumsulwa obungaphansi kwe-98%, futhi konke kulawulwa ngokuqinile ngaphansi kwe-ISO9001, i-UPS 36, i-BP2016, i-EP6, i-GMP noma ezinye izitifiketi njengoba kudingeka ukuhlangabezana namazinga adingekayo amazwe angenisa amazwe.
Innovation ngumthombo wethu wamandla. Ngomsebenzi onzima wabo bonke abasebenzi bethu abazinikezele, ukubekezela kwabo, kanye nemisebenzi yethu yokubambisana namabhizinisi ahlobene, amakolishi namaziko, i-AASraw ithuthukise ukusebenzisana kwethu okungenani nge-30%, esiza ukunciphisa amanani ethu ngokuqhathaniswa nabanye abahlinzeki, ngaleyo ndlela ukukhonza kangcono amakhasimende ethu athembekile, kanye nokwehlisa imfucuza engena emvelweni.
I-AASraw izama ukubekwa isilinganisiso sekhwalithi namanani entengo. Sinikeza inkonzo enokwethenjelwa, kanye namakhrikhthi aphezulu aphezulu kanye nochwepheshe, ukukuletha kuphela okuhle kunazo zonke ezakhiweni. Sibeka izinga elisha lekhwalithi embonini yethu.